कोरियान ,चाइनीज र जापानीजको भिन्न्ता कसरी चिन्ने । | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > कोरियान ,चाइनीज र जापानीजको भिन्न्ता कसरी चिन्ने ।
के हजुर मान्छेको अनुहार हेरेर त्यो मान्छे कुन देशको हो भनेर बताउन सक्नु हुन्छ? कोही ब्यक्तीले बोलेको सुन्नु भन्दा अगाढी तपाईं व्यक्तिको अनुहार, कपाल, कपडाको फेसन हेरेर ऊ कुन देश बाट आएको भनेर पत्ता लगाउन सक्नु हुन्छ। जापान आउनु भन्दा पहिले कोरियान ,चाइनीज र जापानीज मानिसको भिन्नता कसरी चिन्ने भनेर मलाई थाह थिएन। जापानको विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा मलाई धेरै चोटी जापानी, चिनिया र कोरिएन बिच भिन्नता छुटाउन निकै गाह्रो भएको थियो।
यो लेखमा यी तीन देशका व्यक्तिहरुको केहि फरक र केहि समानताहरू उल्लेख गरिएको छ। धेरै जसो सिचुएसनमा फरक छुट्याउन सक्नाले हजुरको जापानको जीबन सजिलो भने पक्कै हुनेछ। लेखिएको लेख मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव र यिनीहरुको केहि सांस्कृतिक र प्राकृतिक विशेषताहरूमा आधारितमा लेखिएको हो। यो लेख पढेपछि आशा छ हजुरहरु यी ३ देशको ब्यक्ती बिच भिन्नाता छुटाउन सकेर अक्वार्ड सिचुएसनबाट बच्न सक्नुहुनेछ।
जापानी, कोरियाली र चिनियाँहरुको उत्पत्ति
यी तिन देशका मानिसहरुको रंग र रुप धेर थोर मिलेपनि उनीहरुको संस्कृति, रिति रिवाज र रहन सहनमा धेरै भिन्नता देखिन्छ। उदाहरणका लागि भन्नु पर्दा, पश्चिमी देशका धेरै मानिसहरु गोरो भए पनि हामी ऊ अमेरिकाकै हो भन्न सक्दैनौ, ’cause पश्चिमी देशमा मानिसहरु बिभिन्न ठाउँहरुबाट आएर बसोबस गर्दै आएकाछन। सबभन्दा पहिले, जापानी “जीन” मिश्रित छन् तर यो स्पष्ट भएको छ कि तिनीहरू मुख्य रूपमा दक्षिणपूर्वी एशिया र इंडोनेशियाबाट उत्पन् भएका हुन्। इतिहास हेर्दा जापानी “साकोकु” अवधिमा जापानमा बिदेशीहरुको अनुमति थिएन्, जापानमा धेरै माइग्रेशन थिएन र यस कारणको लागि तिनीहरू अन्य ठाउँबाट सानो आनुवंशिक प्रभावसँग समृद्ध हुन्छन्।
उता चीन भने एक विशाल देश हो जस्मा विभिन्न अल्पसंख्यकहरु को विभिन्न आनुवंशिकी मिश्रण देखिन्छ। बहुमतमा “हान” समुदायका मान्छेहरु छ्न र उनीहरूको जड उत्तर-मध्य चीनलाई ट्रेस गर्दछ। चीनका अल्पसंख्यकहरू मंगोलिया, मध्य पूर्व र रूसबाट प्रभावित हुन्छन्। त्यसकारण, व्यक्तिको रूप-रंग चीनको क्षेत्र अनुसार फरक फरक हुन्छ। कोरियन जिनहरू दक्षिण चीन र ताइवानका शुरुआती बस्तीहरू बाट अएका हुन। एसिएन जिन सबैमा भएता पनि उनीहरुको भाषाहरू पूर्ण रूपमा अलग छन्| उनीहरुको ईतिहास पनि उतिनै फरक र लामो रहेको छ। त्यसैले उनीहरु भिन्न छन् भन्ने स्वीकार गर्न सजिलो छ
१ . छाला (स्किन)
जापानी, कोरियाली, र चिनियाँ व्यक्तिहरूको मुख्य समानता उनीहरुको छालाको प्रंग हो। उनीहरूको छाला टोन एकदमै उस्तै र एउटाै रंगको पाईन्छ , यद्यपि यी तीनै देशहरूका अल्पसंख्यक समूहहरूमा भने धेरै विविधता हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, उत्तरी जापानका आओमोरी र होकाइडो धेरै नै चिसो हुने ठाउँ हो र त्यतातिरका मानिसहरुको छालाको रंग अरु ठाउँका व्यक्ति भन्दा गोरो हुन्छ, तर क्युसु र ओकिनावा जस्ता दक्षिणी क्षेत्रहरूमा मानिसहरू अरु ठाउँको भन्दा अलि कती कला हुन सक्छन्।अन्य महाद्वीपका मानिसहरू जस्तै चीनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि अन्य छाला टोन(रंग) छन्।
अनुसन्धानको अनुसार, यि ३ देशका मान्छेहरुको उमेर बढे पनि उनिहरुको छालामा उमेरको असर खासै देखिदैन र धेरै मनिसहरु यि तीन देशका व्यक्तिहरुको उमेर सुन्दा छक्क पर्ने गरेको पाईन्छ। मेरो आफ्नो अनुभब अनुसार म आफै कती चोटी मान्छेको रुप हेरेर उनिहरुको उमेर लाई लिएर जुक्किएको गरेको छु। यस्तो छाला वातावरण अनुसार सेन्सिटिव हुन सक्छ, त्यस्तै केमिकल र कडा छालाको प्रोडक्ट पनि यस्तो छालाको लागी हनिकरक हुन सक्छ। यस कारणले, छाला सम्बन्धित ब्युटी समानहरुले जापानमा राम्रो बजार लिन सफल भएको छ। जापानी, कोरियान र चिनिया मान्छेहरु तेसै कारण आफ्नो छाला लाई लिएर धेरै बिचार गर्ने गर्छ्न र धेरै जसो छालामा लगाउँने समान किन्दा निकै ध्यान पुराउने गर्छन। आफ्नो सौन्दर्यको ख्याल राख्ने भएको हुनाले र जैविक सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने हुनाले पनि यि देशका मान्छेहरुको छाला जती बुढो भए पनि भर्खरैको देखिएको हो।
२ . शरीरको आकार
पहिलो कुरा, शरीरको आकार मान्छे अनुसार फरक पर्दछ। कोही पनि धेरै खाएर मोटाउन सक्छ र कोइ ज्यान बनएर पहलवान बन्न सक्छ। जाती र ठुलो भएको ठाउँ सँग र कुन देश को मान्छे हो भन्ने कुरा सँग यस’bout कुनै पनि मत्लब छैन।
तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि शरीरको आकार जीन, आहार र जीवनशैलीको मिश-म्याश हो।तथापि, यो सामान्यतया मानिएको छ कि कोरिया, चीन र जापानका व्यक्तिहरू यस्तै छोटो कदका र संसारका अन्य भागहरूको तुलनामा स्लिम हुने गर्छन। जापान मा पुरुष हरुका एभरेज उचाइ भनेको १७१cm(५ .७ ft) हो भने अमेरिकको एभरेज उचाइ १७८cm( ५.९ft) हो भन्ने प्रमाणित भएको छ (डाटा याहा लेखिएको वेबसाइट बाट लिएको हो: wecare4eyes.com )।
तर चिनी र कोरियनको एभरेज उचाइ क्रमशः १६९.४cm(५ .६७ft) १७५.२ cm(५ .९ft) रहेको भनिएको छ। यो सबै रिपोर्ट फेरिन सक्छ किन भने चिनमा फास्टफुड खानेहरु बढी रहेको पहिएको छ। चीनमा मोटोपन पहिला भन्दा बडेको हुनाले, यो आहिले सम्म पुस्टी भएको छैन कि यसले भबिस्यका पुस्त हरुको उचाइमा केहि फरक पर्छकि नाइ भनेर। यो पनि देखिन गएको छ कि दक्षिण कोरियालीहरु पहिलाको भन्दा अग्लो हुने गरेका छन र यस्को रहस्य दक्षिण कोरियाको विकाशलाई मानिन्छ।
१. अनुहार विशेषताहरू
यी तीन देशका मान्छेहरु थोरै हद सम्म एउटाै देखिन्छ तर यदि हजुरले ले रम्ररी हेर्नु भयो भने तपाईंले यि फरक हेर्न सक्नु हुनेछ। जापानी अनुहार धेरै जसो लामो र फरकिलो हुने गर्छ , त्यस्तै कोरियाली को मुखमा धेरै मासु भएको हुन्छ र गाला को हड्डी अलि माथि भएको पाईन्छ। “हान” चिनीयाको भने अनुहार गोलो हुने पहिएको छ।
तर जब आँखाको कुरा आउछ, भनिन्छ कि जापानीहरुको आँखा चिनी र कोरियाली भन्दा ठुलो हुन्छ। जापानीहरुको आखको कोण माथि तिर फर्किएको हुन्छ, त्यस्तै चिनियाहरुको आँखाको कोण तल तिर फर्केको हुन्छ। यी दुई देशको मान्छेहरु भन्दा कोरियालीको आँखा सानो छ भन्ने कुरा रहे पनि यो ठाउँ अनुसार फरक पर्ने पनि प्रमाणीत भएको छ।
२ . ड्रेसिङ शैली
मेरो जापानी साथीले भनेको जापानी, कोरियान र चीनीको भिन्न्ता उनिहरुले अगएको लुगाको सैलि बाटै थाहा हुन्छ रे। जापानी मानिसहरू ड्रेस अप गर्दा, अरु संग मिसिन सजिलो हुने खालको पोशाक लगाउन प्रयत्न गर्छन्। सादा, सरल रङको पोशाक लगाउँने जापानिज तरिका भनिन्छ। मैले यो पनि देखोको छु कि जापानमा सुट लगाउँनु एक्दम सामान्य मनिन्छ , चाहे त्यो कामको इन्टरभ्यू होस या स्कुल को प्रेजेनटेसन होस जापानीहरु प्राय सुट लगाउँन रुची रख्छ्न। समान्य हुने र सबै शङ मिल्ने गरी उनिहरु धेरै जसो सेतो सर्ट र कालो टाई लगाउँन रुचौउछन।
जापानीको विपरीत कोरियालीहरु धेरै ब्राइट पोशाक लगाउँन मन पराउछन। मेरो कोरियान साथीले भनेको कुरा मलाई जहिले पनि याद आउछ , कोरियामा स्कुलमा प्रेजेनटेसन हुँदा एक्दम चम्किलो कपडा लगाउने चलन छ रे, त्यसतै काम अथवा इन्टर्नशिपहरु गर्दापनि आकर्षक कपडा लगाउँने चलन भएको कुरा थाहा पाए। कोरियाली फेसनले स सानो कुरामा ध्यान दिने भए पनि जापानमा भने काम खोज्द र प्रेज़न्टेशन दिदा जापानिजहरु सिम्प्ल हुने गरेको पाईन्छ।
तेस्तै मेरो आफ्नै अवलोकनमा मैले के पाएभने चीनीहरु धेरै जस्तो मिक्स फैशनका कप्डा हरु लगाउछ्न र प्राय जस्तो जापानि, एसिएन् र वेस्त्र्न् कपडा लगाएको पाइन्छ।
३ . मेकअप
जब जापानि महिलाहरु मेकअप प्रयोग गर्ने गर्छ्न त्यति बेला उनिहरु प्राय जसो नेचुरल देखिनका लागि धेरै नर्मल मेकअप गरेको पाईन्छ। “गङुरो” जस्तो एक्दम एक्स्ट्रिम फेशन पनि छ्न जुनचही आउने र जाने गरेका छन। चीनी महिलाहरु धेरै मेकअप गरेर रतो लिपिस्टिक प्रयोग गरेको पाईन्छ, कोरियान महिला भने कहिलेकही सिम्प्ल मेकअप गरेको पाईन्छ। तर पनि धेरै जसो महिलको आफ्नो आफ्नो मन पर्ने टाईप हुने गर्नाले पनि कोस्लाई के मन पर्छ भनेर छुत्यौन धेरै गाह्रो पनि हुने गर्छ।
अर्को ध्यान दिनु पर्ने बिषय के हो भने , जापानी महिला प्राय: श्रृंगार गर्दा वाइतीननिङ लगाउँछन्, जस्ले तपाईंको छालामा रंग हाल्नु भन्दा हल्का छाला देखाउनको गर्छ। यस्को प्रभाव चिनमा पनि पाईएको छ र चिनमा महिलाले गर्ने मेकअप धेरै जस्तो जापानि महिलाबाट प्रभावित भएको पाईन्छ। कोरियान महिलाहरु यस बात प्रभावित नभएपनि उनिहरु प्लास्टिक सर्जरी प्रती धेरैनै प्रभावित भएको पाईन्छ।
जापानमा बसेको धेरै भए पनि आहिलेपनि मलाई यि तीन देशका मान्छे बिच फरक छुट्यौन्आजै गाह्रो हुने भएको छ। भौगोलिक रूपमा नजिकैको देशका मानिसहरू भएपनी मान्छे बिच फरक छुटौउन गरै हुने भएको पैएको छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एती कुरा यादगर्नु पर्छ कि हामी सबै छुत्तै ठाउँबाट आएकोहो र हामी सबैमा फरक फरक गुण रहेको छ। प्रसिद्ध उद्धरणको रूपमा, “सबैजना जस्तै!सधैं सम्झना छ कि तपाईं बिल्कुल अनौठो हुनुहुन्छ।”
आशा छ, यी कुराहरू ले तपाईं हरुलाईको मान्छे कहाँबाट आएको भन्ने कुरा अनुमान लगाउँन मदत गर्ने छ। फेरी कोइ बिदेशीलाई भेट्नु भयोभने , कस्तो कपडा लगएको छ, कस्तो मेकअप गरेको छ , तेस्तै मुखको आकर यि सबै कुराहरु याद गर्नु होला। तर पनि तपाईंको अनुमान गलत भयो भने नलजाइकन सोध्नु होला।